ေဆာင္းပါး – Cele Myanmar
အိမ်တံခါး၀ မှကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းရွှေ အစီအရင်တစ်ခုဟာ သင့်အိမ်အား ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုး စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာကိုချီစွမ်းအားရဲ့ ခံတွင်းပေါက် ဟုလည်းခေါ်ပါတယ်။
Categories ေဆာင္းပါး	Comments: 0
သားရွေးချယ်တဲ့သူ ဘယ်မိန်းကလေးမဆိုကျမ ချွေးမအဖြစ်လက်ခံမှာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ နှစ်ရှည်လများ ပြုစုပျို
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိတဲ့ အောက်ဘာလေထီဆုရဲ့ အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ပဲခူးမြို့နေ မိသားစုတစ်စုကကံထူးခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့မှာတော့ ကျောင်း ဆရာမအလုပ်ကနေ ထွက်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားများအတွက် ခိုလှုံရာဟေဟာ ဖွင့်ကာ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ မိန်းမချောလေး တစ်ယောက်အကြေင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်..နေတဲ့ မြို့ဟုခေါ်ပါသည်။မြန့်မာရိုးရာ မုန့်အများဆုံး ရနိုင်တဲ့မြို့…!!ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို ထမင်းလွတ်စားသောမြို့…!!ကားဝယ်ပီးရင် ဘုရားကြီးနဲ့ ဘိုးဘိုးကြီးကို ဦးတိုက်သောမြို့…!!ဘုရားပွဲဆိုဇာတ်စင်ကို လမ်းပိတ်ဆောက်တတ်သောမြို့…!!ကိုလေးဖြူ ရိုးူပွဲ ဆိုရင် အချုပ်ကားပါ အဆင်သင့် ကားထိုးထားရသောမြို့…!!
လက်ထပ်ပြီးတာမကြာသေးသောလင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေးလူလုထိုင်စကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအဘိုးကြီးတယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ်
ဖောင်ကြီးက ပြန်လာခဲ့မယ် ကတိတွေပေးပြီးမှ ခုတော့ တစ်ယောက်ထဲ ထွက်သွားရက်တယ်
” ပြန်လာမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပေးပြီမှ……”ဖောင်ကြီး၊ သရဖီ ဆောင်က ဆုံးသွားတဲ့ လူနာ ကိုစိန်ဝင်း အကြောင်း လေး ပြောပြပါ့မယ်…….
ကမ္ဘာကျော်လူသိများလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာပုံကြီး
ကမ္ဘာ့ပထဝီမြေကြောအရ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခြေရာပုံကြီးက တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ခြေချောင်း တွေ ဦးတည်ချက်က အိန္ဒိယဖက်ကို ဦးတည်ပြီး ခြေဖနောင့် က တရုတ်ပြည်ဖက်ကို ဦးတည်ထားတဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ဖြစ်နေပါတယ်။
Categories ဗဟုသုတ/ေဆာင္းပါး	Comments: 0